जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए ! – Online Khabar 24
जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए !
मकवानपुरको एक गाउँपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरी, जसले दुई साताअघि एक छोरालाई जन्म दिइन्।
जन्मिने बित्तिकै छोराको चि’च्याह’टले उनलाई उनको भविष्य देखाएको थियो। सन्तान ज’न्मिएपछि हरेक बाबु आमाले उनीहरुसँग जोडेर आफ्नो भविष्य देख्छन्।
तर उनले देखेको भविष्य र चि’न्ता सामान्य मानिसको भन्दा धेरै फरक थियो। किनकी उनी एक अविवाहित किशोरी आमा बनेकी थिइन्। अझ त्यसमा पनि उनले जन्माएको बच्चाको बुवा आफ्नै दिदीको श्रीमान थिए।
उनलाई आफू सानै उमेरमा अविवाहित आमा बनेको भन्दा पनि बच्चाको बुवा जे’लमा पुगेकोमा प’श्चताप छ। विवाह नै नभई आफ्नै भिनाजुको ग’र्भ बोकेको कुरा बाहिर आएपछि उनले त्यो ९ महिना र सु’त्केरी भएपछिको दुई हप्ता कसरी का’टेकी छन् भन्ने कुरा बताउँदा उनको आँखा रसाउँछन्।
उनको दुःखले त्यतिबेला सिमा पार गर्यो जतिबेला उनको बुवाले उनकै कारण आ’त्म’ह’त्या गरे। अ’विवाहित छोरीले अर्को छोरीको श्रीमानको ग’र्भ बोकेको थाहा पाएका उनको बुवाले यो दुःख सहन सकेनन् र एक महिनाअघि आ’त्म’ह’त्या गरेको उनी बताउँछिन्।
बुवाले पनि उनकै कारण मृ’त्यु’को बाटो रोजेपछि उनलाई आफ्नै घरबाट हेला र दु’व्यर्व’हा’र हुन थाले। अहिले उनी तीनै दिदीको घरमा बसिरहेकी छन्, जसको श्रीमानको बच्चालाई उनले जन्म दिएकी थिइन्। माइतीमा आफ्नै दिदी, दाई भाउजु र छिमेकीबाट हे’ला भएपछि उनी अहिले भिनाजुकै घरमा आएर बसेकी छन्।
तर दिदीले उनलाई मिलेर भिनाजुलाई बाहिर निकाल्ने र मिलेर सधै सँगै बस्ने बताइरहेको उनी बताउँछिन्। उनी आफै पनि भिनाजुलाई बाहिर निकाल्न चाहन्छिन् तर भिनाजु पु’र्पक्षको लागि जे’ल च’लान भइसकेको हुँदा नि’काल्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
‘मेरो बच्चाको बुवा को हो भनेर देखाउ म? जन्म दर्ता बनाउन गएको पनि बन्दैन भने। अब उहाँलाई जे’लमा नै राखेर यो छोरालाई कसले हु’र्काउँछ?,’उनले प्रश्न गरिन्। यतिबेला उनको छोरा बि’रामी छ। ज्वरो आउने, ज्यान भरी ख’टि’रा आउने जस्तो स’मस्या देखिएको युवती बताउँछिन्।
सानै उमेरमा ग’र्भ’धा’र’ण गरेकी उनले न ग’र्भा’वस्थामा पोसिलो खानेकुरा खान पाइन् न त सु’त्केरी अवस्थामा। आम्दानीको बाटो नभएकोले उनले राम्रोसँग खान र बच्चालाई उपचार ग’राउनसमेत नसकेको बताएकी छन्। थाहा खबर
Prevआखा चिम्लेर पानी खेल्दाखेल्दै यसरि खसेकी रहिछन पवित्रा !
nextएकै रातमा मान्छेले मा’रे १४ सय डल्फिन ! कारण निकै दु’खदायी